SAWIRO:Hayada Hilaal Foundation Oo Xaflad abaal Marin ah u Qabatay Ardayda Sanad Dugsiyeedka 2016-2017
July 24, 2017 F.G 0
Xaflad ay soo qaban qaabisay hayada Hilaal Foundation ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho, waxaana abaal marin lagu gudoonsiiyey ardada kaalimaha hore ka galay sanad dugsiyeedka 2016/2017. Xafaladaan oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf, waalidiin iyo ardada ayaa waxaa abaal marin lagu gudoonsiiyey ilaa 9arday oo kaalmaha hore ka galay imtixaankii ugu dambeeyey sanad dugsiyeedkii 2016/2017. Hayada Hilaal ayaa waxa ay waxbarashada ka bixisaan in ka badan 70 arday oo isugu jira Agoon iyo araday reer sabool ah kasoo jeeda. Kharashka ku baxa arday ayaa waxaa bixiya dhalinyaro dalka iyo dibadda ku nool oo gartay inay ku taakuleeyaan walaalahooda u baahan waxbarashada. Waana Hayad u Tagaan Gargaarka Bulshada Somaliyeed Ugudanbeeyntii Waxaad kala Xariiri Kartaa Websetkaan Waxii Faahfaahin Dheeri ah WWW.hilaalfoundation.org
FIIRSO:Nabadoon Muqtaar Oo yiri Degmada Cadale Waa Amaan Waana Lagu Duubi Karaa “IMAAN”
Mid ka Mid ah Beelaha Dega Degmada Cadale Oo Ka Tirsan Gobalka Sh/dhexe ayaa isugu Soo Baxay Meel Fagaaro ah ayagoo isaga Kala Yimid Daafaha Gudaha iyo Dibeda Sida Gobalada Dalka Sida Gobalka Banaadir Sh/hoose iyo Sh/dhexe dhanka Dibeda Waxaa Ka Soo Qeeyb galay Qurbo Joog aad u badan . Isku Soobaxaan ayaa Ahaa Mid Nabadeed Oo ay Sameeyso Beesha Degan Degmada Cadale Oo Sanadkiiba Mar la qabto Waxaana Lagu soo bandhigay Ciyaar Hiddaha iyo Dhaqanka ah Oo lagu Muujinayay Sida uu Yahay Dhaqanka Wanaag ee Somaliyeed Dhinaca kale Waxaa Goobta Ka Hadlay Dareenka Shacabkai iyo Wagaradkii Meesha isugu Yimid Odayaal Dhaqmeedka Sida Nabadoonka Beesha Kulanka Soo Qaban Qaabisay Nabadoon Muqtaar Nabadoon Maxamed Xasan iyo odoyaalo Kale Oo Aqyaar ahaa Kuwaasi Oo Ka Hadlay Kulanka Meesha Ka dhacay iyo Sida uu ahaa . Waxaana Hadalka Bilaabay Mid ka Mid ah Odayaasha Dhaqnka ,Waxuuna Sheegay Kulanka in uu Yahay Mid isku soobax Nabadeed Oo Sanadkiiba Mar La isugu Yimaado ,iyo Dagaalada Ka Socda Degaano Hoostaga Degmada Cadale Waxaana uu Ku Baaqay in la Joojiyo Dagaalada [Sii aqri]
Sawiro:Horumar Dhinaca Ganacsiga ah Oo Laga Dareemayo Degmada Ceelbaraf Oo Ka Tirsan Mamulka Hirshabelle
July 19, 2017 F.G 0
Horumar la xiriira dhinacyada dhismaha iyo ganacsiga ayaa laga dareemayaa Degmada ceelbaraf Oo Ka Tirsan Gobolka SH/Dhexe ayadoo uu isbedelkaasi uu yimid kadib markii ay magaaladaasi dib ugu soo laabteen qurba joogta ka soo jeeda Degmada Ceelbaraf oo iyagu maalgashi dhinacyo kala gedisan ah ku sameeynaya Waxaana ay Ka Hir geliyeen Warshada Barafka sameeysa iyo Warshad siinayso Korntada Habeen iyo Maalin Magaalada Ceelbaraf Degmada Ceelbaraf Oo Ka mid ah Degmooyinka gobolka Sh/dhexe ayaa laga dareemayaa isbedel dhinacyo badan wixii ka dambeeeyay markii ay Shacabka Dib ugu Soo laabteen Markii ay Ka qaxeen Dagaalo u dhaxeeyay Dowlada Somaliya iyo Ururka Alshabaab Magaalada Ceelbaraf ayaa laga dareemaya nabadgelyo wanaagsan waxaana xiliyadii ugu dambeeyay magaaladaasi kusoo qulqulayay qurbajoog daneyneysa in ay maalgashadaan degmadaasi, iyo ganacsato ka soo jeeeda deegaankaasi Ceelbaraf Degmada Ceelbaraf ayaa jiho kasta u fiddaysa waxaana ay indhahaagu qabanayaan dhismayaal Cusub Oo qurxoon iyo goobo ganacsi oo indhahaga ay soo jiidanayaan Degmada Ceelbaraf Waxa ay laheeyd iskuul Waxbarasho iyo isbitaal yar Oo qaban Jiray Adeega Caafimaadka Hase ahaatee Dhamaantood Weey Xirmeen Sababo Jiro [Sii aqri]
Qiso: Ninkii beeraleyda ahaa Oo Masaajidka u Shidi Jiray Feeynuusta
July 17, 2017 F.G 0
Qoraaga la yiraahdo Muxammed Xasan Bin Cuqayl Muusa iyo Kitaabkiisa afka Carabiga ku qoran ee Al-Mukhtaar Al-Masuun Min Aclaami Alquruun ahna kitaab uu qisas iyo culuun farabadan ku ururiyey, ayaa waxaa ku jirta qiso aad u yaab badan oo ka dhacday Tuulo la yiraahdo Alxamrah.waxaana ay u dhacday sidan: “Waxaa jiri jiray nin beeraley ah oo ku noolaa magaalo la yiraahdo Alxamrah, waxaana uu ahaa nin aad u Alle ka cabsi badan, sadaqaddana aad u bixiya sidoo kalana Masaajid ka dhisay degmadiisaa. Madaama oo xilliga uu ninkani jiray uu ahaa intii aan la helin Layrka ama korantada iyo guud ahaanba qalabka sida fudud wax loogu iftiinsho, waxaa uu ninkani habeen kasta masaajidkaas keeni jiray Faynuus lagu tukado iyo cashada ay isaga qoyskiisu ugu tala geleen, in haddii uu helo cid baahan oo uu ku sadaqaysto uuna siiyo, haddii kalana inta uu Masaajidka ku cuno uu salaadda ku sugo masaajidka. Muddo ayuu ninkani dhaqankan ku dhaqmi jiray, kadib waxa dhacday abaar aad u ba’an oo baad iyo biyo la,aan badan keentay, waxaa gurey ceelashii biyaha, waxa [Sii aqri]
Xulufada Sacuudiga Oo Wacad Ku Maray in ay Tallaabooyin Hor leh Ka Qaadi Doonaan Qadar
July 7, 2017 F.G 0
Afarta dal ee Carbeed ee hogaaaminaya go’doominta ka dhanka ah Qadar ayaa diidmada Doha ee dalabkooda ku macneeyay halis ammaanka gobolka ka dhan ah. War ay si wadajir ah u soo saareen Scuudi Carabiya, Baxrayn, Masar iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayay sidoo kale kaga digeen tallaabooyin dheeri ah. Afartaas dal ayaa xiriirkii u jaray Qadar bishii hore, iyaga oo ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha jihaaddoonka ah. Qadar oo toddobaadkan horraantiisii diiday dalabka ay soo gudbiyeen dalalkan uu Sacuudigu hor kacayo ayaa iska fogaysay eedaymaha loo soo jeediyay. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa la filayaa in uu Isniinta gaaro dalka Kuwayd oo dhexdhexaadinaya dhibaatada Khaliijka. War qoraal ah oo ay Khamiistii si wadajir ah u soo saareen Scuudi Carabiya, Baxrayn, Masar iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayay ku sheegeen in diidmada Qadar ee 13-kooda dalab in ay ka dhigantahay sida ay u doonayso in ay sii wado siyaasaddeeda ay uga golleedahay in ay ku burburiso ammaanka gobolka. Waxaa kale oo ay ku hanjabeen in ay soo saari doonaan tallaabooyin siyaasadeed iyo mid dhaqaale [Sii aqri]
Ciidamada Mamulka Puntland Oo Howlgallo Ka Sameeyay Gaalkacyo
Ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in ay saakay howlagllo ka sameeyeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Howlgalkaan ayaa daba socday sida la sheegay ganacsade habeenkii xalay ahaa lagu dilay magaaladaasi, kaasi oo dadkii ka dambeeyay dilkiisa ay goobta ka baxsadeen. Ciidamada ayaa saakay waxay guri guri u galeen xaafado badan oo kamid ah Waqooyiga Gaalkacyo balse lama sheegin cid ay usoo qabteen. Saraakiisha hoggaamineysa howlgalkaan ayaa si kooban warbaahinta ugu sheegay in saacadaha soo aadan ay siin doonaan faaah faahinta. inkasto Dilalka qorsheysan ay ku soo badanayaan waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa Dadka qaarkiis waxa ay ku Tilmaamayan in ay Tahay arin amni xumo
Ciidamada ammaanka ee Koonfurta Sudan ayaa gacanta ku dhigey muwaadin Soomaaliyeed oo tahriibin jirey Soomaalida kale, kaasi oo ugu dambeyn laga soo dejiye garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Safiirka Soomaaliya ee South Sudan Xuseen Xaaji ayaa sheegay , in nin kaan muddo badan ay ku daba jireen Interpol, Booliiska Koonfurta Suudaan iyo sidoo kale Booliiska Soomaaliyeed, ugu dambeynna lagu guuleystay in la qabto, lana keeno magaalada Muqdisho. Ninka dadka tahriibin jirey ee lasoo qabtay ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay C/qaadir Cumar Cabdulle, sidoo kale safiirka Waxa uu sheegay in Koonfurta Suudaan lagu hayo Saddex kale oo isaga la shaqeyn jirtay, dhowaanna la keeni doono magaalada Muqdisho. “Dedaal badan ayaa la sameeyay, waxaana lagu guuleystay in la soo qabto C/qaadir Cumar C/lle oo dadka tahriibin jirey, isagana kala gudbin jirey Sudan, Kenya illaa Liibiya, Saddex kale oo isaga la shaqeyneysa waa ay xiran yihiin, dhowaan magaalada Muqdisho ayaa la keenayaa, Dhanka kale waxaa howshaan dedaal dheer u galay Booliiska Soomaaliyeed, Interpol, iyo Booliiska Koonfurta Sudan” ayuu yiri Safiirka. Waa markii ugu horreysay oo magaalada Muqdisho [Sii aqri]
Dowlada:Shaqo uu Qaban Karo Muwaadin Soomaaliyeed aan Loo Ogolaan Ajaanibta ku sugan Dalka.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa Warbaahinta u sheegay in shaqooyin badan oo ay qaban lahaayeen Soomaalida in ay qabtaan dad ajanaanib ah, kuwaasi oo Xiligan ku Nool Magaalada Muqdisho. Waxaa uu Sheegay in Inta uu Shaqo la’aan uu yahay Muwaadin Soomaaliyeed aan Shaqo la Siin Karin Dadka ajaanibta ah,Islamarkaana waxaa uu Tilmaamay in Arimahaasi Wax badan laga qaban Doono. Wasiir Yariisow ayaa Xusay in Xiligan Caqabado badan ay ka Jiraan Xarunta Xalane,kaasi oo ku aadan In Wax Canshuur ah aan laga Qaadin Ganacsatada Ajaanibta ee ku Sugan Xarunta Xalane,Isagoona Sheegay in Wixii Xiligan Ka Dambeeya Lala Xisaabtami doono. Sidoo kale Dowlada Soomaaliya ayaa wado qorsho Shaqooyin loogu abuurayo Dhalin yarada Soomaaliyeed,Inkastoo ay Xusid mudan Tahay in Dowladii uu Hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ay Horey u Sheegtay in Shaqo uu qaban karo Muwaadin Soomaaliyeed aan loo Ogoleyn Dadka ajaanibta ah,Balse uu Amarkaasi dhaqan gali Waayay,Hayeeshee lama Oga Wax is ka badali doona Go’aanka ka Soo yeeray Xukuumada Soomaaliya.
Qarax lagu dilay ganacsade oo goor dhaw ka dhacay magaalada Gaalkacyo
July 6, 2017 F.G 0
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax goor dhaw ka dhacay lagu dilay ganacsade iyo mid ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaashii horumarka iyo nabadda gobolka Mudug. Goob joogayaal ayaa in sheegay in gaarigiisa loogu xiray qaraxa Cabdirisaaq Muuse Nuur-yare oo ku magac dheera Jaxeer. “Jaxeer dhaawac culus oo ka soo gaaray qarax gaarigiisa ka dhacay ayuu ku dhintay.”ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka GMC. Marxuumka dhintay ayaa la dhashay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Mudug Axmed Muuse iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Cabdilladiif Muuse. Ma jirto wali cid sheegatay mas’uuliyada qaraxa ka dhacay Gaalkacyo oo ka mid noqonaya weerarrada lugu bartilmaamedsanayo mas’uuliyiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo.
Maxaa Keenay in Fariimaha Wararka la isugu diro laga joojiyo Warbaahinta Dalka
Adeegga wararka ee la isugu diro farriin qoraaleedyada ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah maanta uga istaagay koonfurta iyo bartamah Soomaaliya, kadib markii hanjabaad culus ay ka timid kooxda Al-Shabaab, sida ay ilo-wareedyo ka tirsan idaacadaha Muqdisho ay sheegeen Qofka doonaya in wararka loogu soo diro farriin qoraal ahaan, wuxuu hal dollar siinayaa bishii idaacadda uu doonayo, kadibna hal-ka dollar waxaa ka goyneysa shirkadda Hormuud, waxaana jiray barnaamij arrintan fududeynaya oo ay sameysay shirkadda Tabaarak ICT Solutions. Halka dollar ayaa kala qeybsan jiray, Idaacadda warka direysa, Hormuud, iyo Tabaarak. Maadaama kumanaan qof ay qabeen barnaamijkan, waxa laga sameyn jiray lacago Faro badan. sidoo kale la joojiyey adeeg kale oo la yiraahdo Short Code, oo dadka ay aragtidooda ugu soo diraan idaacadaha, kadibna laga gooyo 0.50 Cent, oo ay saddexda shirkad kala qeybsan jireen Warar madax banaan ayaa sheegaya Idaacad ku hadasha Afka Shabaabka in ay dalbatay in loo furo fariinta wararka deg dega ah, hadii taasi ay dhici weydana laga wada joojinayo dhammaan Idaacadaha kale. Go’aanka maanta lagu joojiyey barnaamijkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay [Sii aqri]